Mai Chibwe VekwaZimuto: Zemo romunhurume
Zemo romunhurume rakasiyana kuonekwa kwaro neromunhukadzi asi zvinoitika mukati memuviri zvakangofanana. Zemo rinotanga mufungwa asi raitiswa nezvafungwa kana kuonekwa nomuridzi. Vakadzi vanowanza zemo rokungofunga pasina zvaonekwa, nokuti kufunga kwavo panyaya dzokuva nomurume kwakawanda. Varume vanowanza fungwa dzinotanga kubva pane zvavaona. Murume anohi muvhimi anogara achida kuona zviri kuitika. Murume akaona mukadzi waanofungira kuti akanaka fungwa dzake dzinomhanya kumuona asina kupfeka kana kuti avete naye zemo rototanga.
Zvinoitisa Zemo romurume:
Kuona mukadzi anomufungisa zverhoji. Chinomufungisa izvo pakuona mukadzi chingave chinhu chidiki diki sokuti
Ane magaro akanaka kuona
Ane muromo wakanaka kuona
Ane chiso chakanaka kuona
Mafambire ake anoitisa zemo kuvarume
Kunyemwerera kwake kunopa murume zemo
Chechipiri murume akaona mukadzi asina kupfeka anokwanisa kuita zemo. Asi ndombohwa varume vachiti zemo rinowanda kana mukadzi waari kutarisa ane zvipfekwa zvishoma pane asina zvachose.
Kuona pikicha yevakadzi vasina kupfeka.
Kuona mafirimu evanhu vari kurhojana. Kune varume vakawandisa vanotobhadhara mari kuona izvi asi ipapo vane vakadzi mudzimba.
Kunhuwidza hwema hwepamberi pomukadzi. Bhinzi yomukadzi inogarogadzira hwema hunoti chero ukaisa perfume yakadii hunongohwikwa nevarume. Kazhinji havazivi kuti chii chamisa chombo nokuti hwema uhu huri pasi pasi. Kana iwe mukadzi ukamboita zemo imwe nguva, ukazobuda wovhengana nevanhu, unenge une hwema hwerhoji huri pakakwirira zvokuti varume vakawanda ukagara navo mubhazi kana mota vanongomira chombo vasingazivi kuti chii chiri kumisa chombo.
Kuona mhuka dzichiisana kunomisa zvombo zvevamwe varume kwete vese.
Kuverenga nyaya dzokuisana kwevanhu kunokwanisa kuitisa murume zemo.
Kudyiswa mushonga wekumisa chombo. Mazuvano kunyika dzakawanda kune mishonga inoti murume akadya anomira chombo nguva yakareba. Mishonga iyi inokwanisazve kuitisa HEART ATTACK saka musaijara, zvikuru kana usina kuudzwa kuti shandisa naDOCTOR wako.
Kana murume aita zemo
Kana zemo ratanga mufungwa, shoko rinotumigwa kuzasi kundoudza pamberi kuti gadzirira kupinza chombo mumukadzi wawaona. Hazvinei kuti mukadzi wacho waonekwa munhu chaiye here kana kuti ipikicha zvayo iri papepa.
Murume anotanga kumisa chombo ari mudumbu mamai vake ozvagwa okura achingomisa chombo chero achiri mwanana asingazivi kuti chombo chinopinzwa pai. Ukarera chimwana chikomana chidiki uchaona kuti pachinoda kuweta, chombo chinomiswa neweti. Izvi hazviitiki kuvanhukadzi.
Kozoti akura kusvika makore anoita gumi nemaviri kana kupfuura, anotanga kukura chombo mabhora ake orembera okurawo, ihwi rake roderera oita zvokutaura somurume. Zvadaro anotanga kugarorota nezvavakadzi achiti akarota obudisa urume. Anotangazve kuhwa kuda kubudisa urume kana akasvinura zvinoita kuti atange kuda kutamba nechombo chake. Vakomana vanoita 95% vanozvibudisa urume pazera iri. Vasikana vanotambisa bhinzi dzavo panguva iyi vanoita 80%.
Kuzobvapo mukomana achikura anofanira kugarobudisa urume ega kusvika aroora ndipo paanoda kugarorhojana nomukadzi wake. Ichi chinhu chokuti vanhu vaviri ava vanofanira kuvata vese chinhu chinonetsa vakawanda zvokuti ukagarisa usina kuwana wekuvata naye chero uchigarozvibatsira unongohwa muviri uchida kuva norubatsiro kubva kune umwe munhu.
Murume zemo rake harihwisisiki zvakanaka asi kungoti kana wakaroorana naye ongorora nguva dzaanoda kuvata newe woona kuti wamubudisa urume. Murume anogarobudiswa urume haana hasha uye zvigwere zvinoita zvishoma. Murume anochengetedza urume mumuviri RESISTANCE yake yezvigwere iri pasi saka anogarobata zvigwere kazhinji asi havasi vese.
Kana murume aita zemo, chombo chinomira chega pasina ambochibata bata. Zvadaro kana ukachibatabata, unoona chichiwedzera kumira Pamwe chinoti Gwi, gwi, Gwi mumaoko ako. Ukaramba uchipurudzira unoona sokuti murume haana CONTROL yechombo chake.
Ukuwo ukamutarisa maziso unoona seane kaLayer kemusodzi. Kana wakambotarisa murume wako ane zemo unoziva wega kuti munotaurirana nokutarisana chete asi muchitohwisisana pasina anotaura nokuti wega unoziva kuti murume ava nezemo.
Muviri wake unomira tumvere turipo zvokuti ukamupurudzira magaro minyatso, makumbo zvakangofananawo nezvinoita vanhukadzi, anowedzera zemo, chombo chowedzerawo kuoma.
Ukaramba uchimurezva uchaona pachombo pake pava kubuda oil yakatsetseka chose kupfuura inobuda pachitubu chomukadzi. Oiri iyi inotakura urume zvokuti ukaisiigwa mukati mako unokwanisa kuita mimba ipapo mazoshandisa kondhomu. Unokwanisazve kubata chigwere kana ane chigwere.
Kana murume akaita zemo rakawanda akasabudisa urume, anokwanisa kugwadziwa nemabhora ake, iri nyaya yokuti muviri wange woda kubudisa urume iye ndokurega saka urume hwuya hunofanira kutogwazve nomuviri (ABSORB), zvinova ndizvo zvinogwadza. Kana ari murume wako ukaona aita zemo mupe mukana wekubudisa urume. Kana musina nguva yokuisana ukamubata bata chombo anokangamwa zvenguva otokurhoja chete. Zemo rine simba kupfuura fungwa.
Kana aita zemo iwe uri kumwedzi shandisa maoko ako kana kumukwiza chombo nemazamu ako, kana kumuputira chombo nemazamu, iye okoira seari kukoira chitubu kuti abude urume. Mazamu ane ganda rakatsetseka uye anodziya zvokuti kana une mazamu makuru hazvinetsi kuti murume akupe chombo iwe woputira wakachiisa pakati pemazamu, mowana mukana wekuti iye achikoira iwe uchikwhizirira nemazamu kuti urume hubude zemo rake ripere. Kana une mazamu madiki zora mafuta mumaoko womuvanzarika nomusana chombo chakati twii mudenga, womukoirisa maoko ako uchipota uchiisa puresha kuti kukwiza kuwedzere. Usamugwadzisa.
Kana usiri kumwedzi munongovatana henyu monakigwa mese. urume hunobudira mukati mako zvinova ndizvo zvaafunga kuti aite zemo racho.
Zemo remurume hariwanzi kunetsa kubvisa chero nguva iri shoma ukamuudza kuti kasira kupedza tiende kubasa, anokasira. Asi hachisi chinhu chakanaka kugaroudza murume kuti akasire nokuti anozokukasirira mune nguva yokuti akunonokere unakigwe. Kana uchiziva kuti murume wako anoita zemo mangwanani (varume vashomanana vasingaiti zemo mangwanani kuma 5 kuseni) kasira kuvata kuti ugokasira kumuka moisana pachinenguva momboita kahope ke awa imwe chete, mozomuka muenda kubasa.
Zemo romurume harinetsi kuziva kuti anaro nokuti wega unongoona chombo chati twii wototanga kumunemera nokumukurudzira kukubatabata kuti uitewo zemo.
Murume haawanzi kukwanisa kuvanza zemo rake kana kukwanisa kukunyebera kuti urume hwabuda nokuti wega unoeredza kana azobudisa chombo muchitubu apedza kukudiridzira. Saka zviri nyore kuziva kuti uri kukwanisa murume wako here kana kwete.
Murume kana avete chombo chinomira kanokwana 8 times asingatombozivi kuti chamira. Kana ange asina kumbotapudzwa urume, anokwanisa kungobuda urume panomira chombo avete asi zvinoitika kamwe chete pausiku uye hazviitiki mazuva ese. Murume kana uri kumwedzi ukasafunga kumubatsi nemaoko, anokwanisa kungobuda urume avete, ziva kuti uri kutadza basa.
Murume anoita zemo diki obva apera zemo futi nguva shomanana. Hino isu tikabata zemo rinokwana kuita awa yese wakazvimbirira zasi chero bhinzi yavata hayo. Zemo romurume rinoda kugarofidhwa nomukadzi wake kuti asafunga zvakawanda zvokuzhe uko. Zemo romurume chinhu chakanaka chose mumba nokuti zvinobatsira mese. Kana mambotsamwisana paya ukashaya mukana wekutaura naye ukamirira pakunovata, kana uchinhuwirira zvakanaka wambogeza, unokwanisa kuitisa murume zemo.
Kana murume achigarodya zvokudya zviri fresh anowedzera zemo. Isu tisu tinobikira varume vedu. Ngatitore nyaya yokubika iyi senyaya yakakosha. Tisu tinoda kuti murume akwanise kuva nezemo mumba. Tisuzve tinoda kuti muruma kana atanga kuvata nesu akwanise kuva nourume hwakawanda. Kana asina anofidha zvakanaka muviri haukwanisi kugadzira zvese izvi.
Saka tinei nazvo isu?
Hwisisa kuti dzimwe nguva iwe uri kuda kuvata nomurume, iyewo ari kuda asi chombo hachina simba. Pakadai unofanira kuwana mukana wekuwedzera zemo rake. Muudze nyaya dzerhoji. Sokuti pane umwe musi waakakurhoja zvakakufadza chose, muudzi kuti waihwa sei achikukoira. Varume zvokukudzwa panyaya iyi zvinovaitisa zemo futi.
Poitazve kuti kana uchingoda kuti murume aite zemo unokwanisa kumukonzera kuti awane hwema hwepabhinzi yako, Ukazvikwizirira ukanogara pedo naye anokwanisa kuhwa hwema hwako otanga kuita zemo. Nyaya yehwema iyi kunohi kune vanhu vaya vamunoona kuti haana runako asi anongogaronyengwa nevarume, muchitoshaya kuti vanoonei paari. Zvinohi vanhu vakadai vane bhinzi dzinowanza hwema hwacho kunitisa varume zemo. Vakadzi havahwi hwema hwevakadzi.
Zvinohi kana mukaisana paya mukatanga kuita chimwe chinhu makamirira kuti murume amirezve chombo, ukakwanisa kuti uku wakavhura makumbo, uku wakafukidzira murume nejira zvokuti ari kuhwa hwema hwese huri kubva pabhinzi yako, anokasira kumira chombo.
Hwema hwatiri kutaura hahubvi muchitubu asi pabhinzi hunohi pachirungu pheromone.
Kana uchitenga nhumbi dzokupfeka, funga kuti chii pamuviri wako chinoti murume wako akachitarisa oita zemo. Pfeka nhumbi dzinochitaridza murume.
Ukaudza murume zvaunoda kuti akuite uchishandisa mahwi akakodzera kumuitisa zemo anoita zemo.
Iwe muridzi wemurume wana mukana wekuitisa murume zemo. Wadaro ugoribvisa futi.
Posted by Mai E Chibwe at 14:59
Mati zvekudya zviri fresh zvinowedzera zemo rababa, Ko zvokudya zvisiri mushonga zvinowedzera zemo uye kunyatso simbisa nhengo yababa ndezvipi? uye zvingabatsire vakadzi kuwedzera zemo ndezvipi?
Kana ukashandisa mushonga wakaita se Viagra kana zvimwe kumisa chombo, zviri nani udaro hako kuda kamwe chete pagore nokuti ukadarika ipapo zvisinei kuti mushonga upi zvawo, unokwanisa kuita HEART ATTACK kana
1 makore ako apfuura 35
2 Une heart Condition
3 Hauna utano hwakakwana
4 Hausi munhu akagwinya.
Unokwansa kujaidza muviri kumirira mushonga uya zvokuti kana usinaa kumwa mushonga chombo hachimiri.
Zviri nani kudzidzisa fungwa kuwana chimwe chinhu pamukadzi wako chinoti ukachifunga woita zemo. Pamuviri wemukadzi pane chimwe chinhu chaunowana chichikuitisa zemo. isa fungwa ipapo.
Pakudya mumba mese munofanira kuderedza zvinhu zvine fafuta akaita se mafuta enyama kana cooking oil, zvinonomira mutsinga zvoderedza kumhanya kweropa, kunova ndiko kunoitisa zemo romurume kana mukadzi.
Kare varume vaisvika makore kana 80/90 vachingozvarisa vakadzi vavo vechidiki, zvinoreva kuti chombo chiri kumira, iri nyaya yokuti vange vasina kudyakune mafuta akawanda uye vange vasina mafiriji okuchengetera zvinhu saka vaidya FRESH. Izvi ndizvo zvatinokurudzigwa kudya mudzimba. Vanhu wanai nguva yokubika asi mafuta itai mashoma.
Zvokudya zvinogwinyisa kumira kwechombo nokuwanda kweurume ndakambozvinyora wani pamwe. ndichatarisa.